सामाजिक द्वन्द भनेको के हो ? नेपालमा यस्को प्रभाव, कारण र असरहरु के हुन् ? « Nijamati Khabar
सामाजिक द्वन्द भनेको के हो ? नेपालमा यस्को प्रभाव, कारण र असरहरु के हुन् ?
शान्ती भनेको हरेक व्यक्तिले कुनै डर, भय र त्रास विहिन वातावरणमा रही खुसी पूर्वक आफ्नो जीवनयापन गर्नसक्ने अवस्था वा स्थिती हो । भनिन्छ, अन्याय अशान्तीको र न्याय शान्तीको जरोमा रहन्छन् । यो द्वन्द्वको विपरितको स्थिती हो र यो सापेक्षिक शान्ती हो । द्वन्द्वका समयमा जनतामाथी हुने हिँसा, हत्या, असुरक्षा, भय र संत्रासबाट मुक्त गर्नु नै शान्तीको अभिप्राय हो ।
यो असुरक्षा, भय र त्रास विपरितको स्थिती हो । अशान्ती भएर हिँसा उत्पन्नगर्ने माथी दण्डित गरी सामाजिक व्यवस्था र सुरक्षाको स्थिती उत्पन्न गर्नु र सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो कार्यहरु निर्भिक भएर गर्न पाउनु, सम्पती, जीवन र परिवारको सुरक्षा हुनु, अपराधी, गुण्डागर्दी र अन्यायबाट सुरक्षित हुने अवस्था नै शान्ती हो । शान्ती भनेको हिँसालाई रुपान्तरणगर्ने प्रकृया पनि हो । शान्तीको समयमा, आत्मनिर्णयको अधिकार, मानव अधिकारको सम्मान, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, आत्मसम्मान र शान्तीप्रतिको सम्मानको सामाजिक अवस्था रहन्छ ।
शान्ती एवंम् आत्मिक आनन्दको रुपमा पनि रहन्छ । हिँसात्मक अवस्था नहुनु मात्र पनि शान्ती होईन । सकारात्मक, गतिशिल एवंम सहभागितामुलक प्रकृयाको आधारमा पारस्परिक सहमति र समन्वयमा वार्ता एवं संवादको माध्यमबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु पनि शान्ती हो । जीवित शान्तीमा एउटा आदर्श समाजका लागि कल्पनागर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरु,आर्थिक सम्मुनति, पर्यावरणिय सन्तुलन एवंम अन्य आधारभूत तत्वहरु समावेश हुन्छन् ।
यसदेखी वाहेक शान्ी प्रेमी विश्व नागरिकमा विश्व शान्तीवादी नेता स्वामी सन म्योङ मून भन्नु हुन्छ — “ मैले वन जंगललाई ज्यादै प्रेम गर्नुको कारण संसारको शान्ती त्यही भएकोले हो । वन जंगलमा वस्ने प्राणिहरुले एकअर्का विरुद्ध लडाई गर्दैनन् । उनीहरुले एकअर्कालाई खान्छन तर त्यो भोकको कारण र टिक्नु र बाँच्नुपर्ने भएकोले हो । उनीहरुले द्वेष राखेर झगडा गर्दैनन् । जनावरहरुले अन्य जनावरहरुलाई घृणा गर्दैनन् । रुख विरुवाहरुले अरु रुख विरुवालाई घृणा गर्दैनन् । शान्तीबहाली हुनको लागि द्वेष, इष्र्या, घृणा समाप्त हुनु आवश्यक छ । मानव नै यस्ता छन् जो उही प्रजातीको सदस्यहरु प्रति द्वेष राख्दछन् ।” शान्ती भन्ने कुरा त्यहा मात्र स्थापित हुन्छ जहाँ एक अर्का बीचको अस्तित्व र उपस्थितीलाई स्वीकारिन्छ ।
नेपाली समाजमा खासगरी व्यक्ति(व्यक्ति वीच द्वन्द्व‚ परिवारमा द्वन्द्व‚ समुदाय समुदायमा द्वन्द्व‚ राजनीतिक पार्टिवीच द्वन्द्व‚ यातायात बन्द‚ नेपाल बन्द‚ छुवाछुत भेदभाव आदि जस्ता द्वन्द्व देखिएको पाइन्छ । नेपालमा देखिने यस्ता सामाजिक द्वन्द्वको मूलभूत कारण एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्नु‚ सम्मान नगर्नु नै हो ।
अरु कारण निम्न छन् :
सामाजिक द्वन्द्वको प्रभाव; समाजिक द्वन्द्वले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्दछ । यसको प्रभाव निम्न हुन्छ :
द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरु:
सामाजिक द्वन्द्व समाधान गर्न सर्वप्रथम द्वन्द्वको पहिचान गरी सो अनुरुपका उपाय अवलम्वन गर्नुपर्दछ । समाजमा एकले अर्कोलाई सम्मान गर्नु पर्दछ‚ विश्वास गर्नु पर्दछ । यसैबाट द्वन्द्वको समाधान हुन्छ ।
अरु उपायहरु निम्न छन् :